अनलाइन वर्ड काउन्टर - शब्दहरू गणना गर्नुहोस् | क्रिएटिव अनलाइन
अनलाइन वर्ड काउन्टर - शब्दहरू गणना गर्नुहोस्
निम्न उपकरणले अनुमति दिन्छ पाठमा शब्दहरूको संख्या गणना गर्नुहोस् छिटो र सजीलो गरी। तपाईंले केवल तलको बक्समा पाठ लेख्नुपर्दछ र काउन्ट शब्द बटन थिच्नुहोस्।
कुनै पञ्जीकरण आवश्यक छैन। पाठमा शब्दहरूको संख्या केही सेकेन्डमा गणना गर्नुहोस् हाम्रो शब्द काउन्टर अनलाइन.
जस्तो कि यो उपयोगी थियो, हामी पनि छ अनलाइन चरित्र काउन्टर.
1 कसरी काउन्टर शब्द प्रयोग गर्ने?
2 के गर्ने यदि अनलाइन वर्ड काउन्टरले मेरो लागि काम गर्दैन?
कसरी काउन्टर शब्द प्रयोग गर्ने?
को अपरेशन शब्द काउन्टर जुन हामी तपाई समक्ष प्रस्तुत गर्दछौं धेरै सरल छ: तपाईले तलको बक्समा पाठ प्रतिलिपि गरेर टाँस्नु पर्छ र काउन्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
तुरून्त, एक सन्देश संगै देखा पर्नेछ कुल शब्दहरूको संख्या जसको तपाइँको लेख वा प्रविष्ट गरिएको पाठ समावेश गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो त्यो हो कुनै शब्द सीमा छैन, ताकि तपाईं जब सम्म तपाईं चाहानुहुन्छ सामग्री राख्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं सल्लाह चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि पाठलाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् जुन तपाईंको लागि धेरै सहज हुनेछ। Ctrl + C (पाठ प्रतिलिपि गर्न) र Ctr + V (हाम्रो उपकरणमा पाठ टाँस्न)।
के गर्ने यदि अनलाइन वर्ड काउन्टरले मेरो लागि काम गर्दैन?
यदि उपकरणले काम गरे जस्तो काम गर्दैन, हामीसँग बिभिन्न विकल्पहरू छन्। तर हामीलाई सबैभन्दा मनपर्दो भनेको माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रयोग गर्नु हो, जहाँ तपाई फुटरमा देख्न सक्नुहुन्छ, वा उपकरणको फेदमा, शब्दहरूको संख्या जुन तपाईंको लिखित कागजातमा समावेश छ.
यद्यपि हामी पक्का छौं कि यस पृष्ठसँग तपाईसँग आवश्यक सबै कुरा छ तपाईंको कागजातमा शब्दहरू गणना गर्नुहोस्, त्यसैले हामी दृढताका साथ यसको सम्भवताको प्रयोग गर्न हौसला दिन्छौं।
यो विशेष गरी उपयोगी छ यदि तपाइँलाई कागज, TFG, अंग्रेजी परीक्षण, वा अन्य कार्यहरूको लागि शब्द सीमामा पुग्न आवश्यक छ जसमा न्यूनतम शब्दहरू अनुमोदित हुन आवश्यक छ। हाम्रो उपकरण को लागी धन्यबाद, तपाई यसलाई सेकेन्डको एक मामला मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।